Indlela yokukhetha iMaterial yeBag yoKhuseleko lweNdalo engalukiweyo
Ibhegi egqwesileyo engalukiweyo iqinile, yomelele, intle ngenkangeleko, ilungile emoyeni, iyasebenziseka kwakhona, iyahlambeka, isilika-ikhuselwe intengiso, imakishwa, kwaye inobomi obude benkonzo. Ifanelekile nayiphi na inkampani kunye naluphi na ushishino njengentengiso kunye nezipho. Guangzhou Tongxing Packaging Co.,...
Uchonga njani ilaphu leNylon
I-Polyamide yaziwa ngokuqhelekileyo njengenayiloni (inayiloni) kunye nenayiloni, kwaye igama layo lesiNgesi yiPolyamide (PA); I-PA ineempawu ezilungileyo ezibanzi, ezibandakanya iipropati zoomatshini, ukuxhathisa ubushushu, ukuxhathisa kwe-abrasion, ukuxhathisa imichiza, ukuzithambisa, kunye nokukhuhlana kwe-Coefficient ephantsi, i-flame retardan ethile ...
IiNzuzo ezi-4 zokusebenzisa i-Eco-Friendly Bags
Ungcoliseko olumhlophe lungcoliseko olukhulu lokusingqongileyo kwilizwe lethu, kwaye inkunkuma yeplastiki elahliweyo inokubonwa rhoqo kwiindawo ezininzi zikawonke-wonke. Ukungcwatywa emhlabeni kuya kungcolisa amanzi aphantsi komhlaba kwaye kuvelise iigesi eziyingozi xa utshisiwe. Ke ngoko, sebenzisa iibhegi ezihambelana nokusingqongileyo kwaye usebenzise iplastiki encinci ...
Ungayikhetha njani ibhegi yokuthambisa efanelekileyo?
Ubuhle buyindalo yowesifazane, kubasetyhini, izimonyo zemihla ngemihla ziphantse zibe ngumsebenzi wesikolo oyimfuneko. Ke ngoko, kwiibhegi zabo, kufuneka kubekho ibhegi yokuthambisa onokuthi uyiphathe kunye nawe ukuze ukwazi ukuchukumisa izithambiso zakho nangaliphi na ixesha. Nangona iibhegi zokuthambisa aziyiyo ingoma eqhelekileyo kwingxowa yosapho ...
Ukungaqondi kwabantu kwiingxowa ezingalukwanga
I-Guangzhou Tongxing Packaging Products Co., Ltd. igxile ekuveliseni iingxowa ezingalukwanga kunye ne-laminated non-loven bags iminyaka eyi-15. Makhe ndichaze ukungaqondi malunga neengxowa ezingalukwanga. Iingxowa zokuthenga ezingalukwanga ngamalaphu angalukwanga enziwe ngeplastiki. Abantu abaninzi bacinga ukuba ilaphu yindalo ...
Uyigcina njani ingxowa yesikhumba ukuba ayisetyenziswanga ixesha elide
Abasebenzisi abaninzi be-intanethi banokungabaza kwi-Intanethi, oko kukuthi, xa iingxowa zabo zesikhumba zingasetyenziswanga ixesha elide, indlela yokwandisa ubomi babo benkonzo kunye nomgangatho, kwaye zeziphi iindlela zokugcinwa kufuneka zamkelwe. Nangona abantu abaninzi besazi kancinci, kusekho ukungaqondi kakuhle. Umzekelo, ...
Yintoni Usetyenziso Lwezingxobo zokutsala ilaphu leNayiloni?
Kule mihla, iintlobo ezahlukeneyo zeengxowa zokutsala zithandwa kwimarike, kubandakanywa ikotoni kunye nelinen yelinen, ilaphu lokuhamba, ilaphu lenylon njalo njalo. Phakathi kwabo, iingxowa ze-nylon zokudweba iingubo ze-nylon zizona zikhethekileyo. Ngezantsi umzi-mveliso wengxowa yomtya iGuangzhou Tongxing Packaging Products Co., Ltd. iya kukunika ...
Iindlela ezimbini zokwenziwa kweengxowa ezingalukwanga, ukuthunga ngesandla kunye noku-ayina komatshini
Ibhegi engalukwanga yenye yezona bhegi zinoqoqosho, ezifanelekileyo kwaye zinobuhlobo nokusingqongileyo, ezithelekiseka nebhegi yecanvas, oxford bag. Kwaye kukho iinkqubo ezimbini eziqhelekileyo zokwenziwa kweengxowa ezingalukwanga, oko kukuthi, ukuthunga kunye ne-ultrasonic bonding. Kananjalo iingxowa ezilaminethiweyo ezingalukwanga zine...
Ngaba uBhaka omnye unokwenziwa ngokwezifiso?
Umbuzo: Ngaba ndingenza ngokwezifiso ubhaka omnye? Impendulo: Inani leengxowa zobhaka linokwenziwa ngokwezifiso, kodwa kukho izinto ezifunekayo, oko kukuthi, kubenzi beengxowa ezinkulu, ukuba inani lamaqela alungelelanisiweyo lincinci kakhulu, kukho enye, ezimbini okanye ezininzi zobuninzi. Esisiseko...
IKoteyishini kaBhaka yoMvelisi iSekwe kwiMbango kunye notshintsho lwaBathengi
Kwinkqubo yokwenza i-backpack customization, imiba yexabiso ibisoloko igxininise kubathengi bokwenza ngokwezifiso, kwaye wonke umntu unethemba lokuba abavelisi banokubonelela ngexabiso elikhethekileyo. Enyanisweni, okoko nje ingumenzi oqhelekileyo, isicatshulwa esibonelelwe ngumenzi we-backpack kwi-custo...
Umnyhadala oPhakathi kweNkwindla owonwabileyo–iingxowa zaseGuangzhou Tongxing
NguMnyhadala ophakathi kweNkwindla nge-21 kaSeptemba 2021. Inkampani inqwenelela bonke abasebenzi kunye neentsapho zabo uMnyhadala omnandi waseMid-Autumn, kwaye inqwenelela wonke umntu inyanga epheleleyo kunye nokuhlangana kwakhona. Shiyun: “Lingisa usapho lwakho ngalo lonke ixesha leeholide”, ukuze ubulele bonke abasebenzi ngexesha labo elide...
Iindidi zengxowa yomtya wokutsala
Iingxowa zomzobo, ezaziwa ngokuba ziipokotho ezicuthayo, iipokotho eziqinileyo, iipokotho ezitshixayo, kunye neepokotho zomtya, ziingxowa zokupakisha ezenziwe ngokusebenzisa iintambo ezahlukeneyo ukubopha ibhegi ngokuqinileyo ukuthintela imixholo ukuba ingavuzi. Isetyenziswa ngokubanzi kwisipho kunye nemveliso yokupakisha. Ingxowa yomzimba imathiriyeli yomtya...
Ababoneleli ngeengxowa zomqhaphu, Ababoneleli bebhegi yokuhlamba ihotele, Ibhegi yomqhaphu,
No.9, iHuafu Road, indawo yoshishino yaseDonghua, idolophu yaseRenhe, isithili saseBaiyun, eGuangzhou, eChina, 510470